महिलाहरुले शारीरिक सम्पर्क गर्नु अघि ,जहिले पनि यी ५ कुराहरु लुकाउँछन्
September 5, 2019 September 5, 2019 Purakhabar News
काठमाडौ । शारिरिक सम्पर्क भनेको मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्ने कार्य नै हो । किनभने यो प्राकृतिक रुपमा नै विश्वमा जति पनि जिवित प्राणीहरु छन् । तिनीहरुमा लागु हुन्छ । त्यसैले यदि महिलाहरुलाई तपाई शारीरिक सम्पर्क पहिले यस किसिमको केही कुरा सोध्नुहोस् । ज्यान जाला भन्दैनन् ।हेर्नुस के के हुन् ? पहिलो कुरो हो , उनीहरु यौन सम्पर्कको त्यो कठिन पिडा होस् वा चित्त दुखाएको अवस्था होस् , वा जस्तै सुकै अवस्थामा पनि म ठिक छु भनेर लुकाउछन् । त्यसैगरी दोस्रो कुरा हो ,यदि घरबाट करलागी मन नपरी नपरी विवाह…
यस्ता विरामीलाई से*क्सले गर्दा फाइदै फाइदा
September 3, 2019 September 3, 2019 Purakhabar News
मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा के के फाइदा हुन्छः टाउको दुख्नेः नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम सेक्स गर्नेहरुलाई माइग्रेन हुने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । ब्लड प्रेशरः उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि नियमित सेक्स फाइदाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा उच्च…
एक्लै यौन सन्तुष्टि हुन्छ ?
August 25, 2019 Purakhabar News
काठमाडौंः दुई व्यक्तिबीच शारीरिक सम्पर्क गरेर यौन सन्तुष्टि लिने प्रक्रिया सबैभन्दा सहज प्रक्रिया हो तर सधैँ यो सम्भव हुन्न । विवाह पछिको अवस्थामा समेत श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् । हाम्रो समाजमा विवाहअगाडि शारीरिक सम्पर्कको माध्यमबाट यौन सन्तुष्टि लिनु सामाजिक रुपमा समेत जटिल छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा यौन सम्बन्धलाई चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यसले पनि एक्लो अवस्थामा यौन सन्तुष्टि लिन महिलालाई गाह्रै छ । तर विवाहित हुन् या एक्लो महिला, यौन चाहनालाई निषेध गर्न सम्भव छैन । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक कोणबाट समेत…
नछुटाई यौनक्रियामा सक्रिय हुने महिलाहरुलाई मिल्छ यो अचम्म लाग्ने फाइदा !
August 2, 2019 Purakhabar News
काठमाडौँ: – आजकाल महिलाहरु घर वा बाहिर दुवै क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन्। दिनभरि विभिन्न प्रकारका कामहरूको गर्ने भएका कारण उनीहरु प्रायः बिर्सन्छन् कुन चिज कहाँ राखेको थियो र कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा । यसको लागि मेमोरी पावर बढाउन आवश्यक छ। मेमोरी पावरलाई बढाउने मनोरञ्जनपूर्ण तरिका यो भन्दा अरु हुन सक्दैन, विशेषगरी महिलाहरुका लागि । यो एक नयाँ अनुसन्धानमा भनिएको छ । अनुसन्धानले फेला पारेको छ कि अत्याधिक मात्रामा यौन सम्पर्क गर्नाले महिलाहरुमा सम्झने क्षमता बढ्छ। महिलाहरूले यस तरिकाबाट आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउनुहोस् मोन्ट्रियलको म्याकगिल विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो…
शारिरीक सुखभोग गर्दा–गर्दै युवतीको निधन
July 20, 2019 Purakhabar News
काठमाडौ । हरेक दम्पतीले आफ्नो यौन जीवन खराब नहोस् भन्ने कामना गर्दछन् । यसका लागि उनिहरुले अनेक प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । एक जोडिले शारिरीक सुखका लागि पहिले औषधीको सेवन गरेर शारिरीक सुखको कार्यमा रहे । तर दुर्भाग्य यसका कारण युवतीले ज्यान गुमाउन पुगिन् । शारिरीक सुखभोग प्राकृतिक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै यसको प्राकृतिक नियम विपरीत जाँदा मानिसको जीवन आनन्दमय हुनुको साटो कष्टसाध्य हुने मात्र हैन मृत्युका मुखमा समेत पुग्दछ । भारतको गुजरातका २६ वर्षिया किशोर गुप्ताले औषधि सेवन गरेर आफ्नी केटी साथी नितासँग शारिरीक सुखभाग गर्दा निताको मृत्यु भएको…
July 15, 2019 Purakhabar News
गाउँ घर मात्र होइन, शहर पनि अस्थायी साधनका बारेमा अझै खुलेर बहस गर्न तयार देखिन्न । यस्ताे अवस्थामा महिलाहरूमा अस्थायी साधनकाे रूचि बढेकाे हाे ।बागलुङ जिल्लामा महिलाहरूमा अस्थायी साधनकाे प्रयाेग बढ्दै गएकाे छ । पुरुषमासमेत एक किसिमको लाज र संकुचन देखिन्छ । महिलाहरु, त्यसमा पनि दुरदारजका पढ्न, लेख्न र अवसरले पछाडि परेकाहरु यस्ता विषयमा कति खुल्लान् ? सामान्यतयाः कठिन उत्तर आए पनि जिल्लाको दुर्गम खुंखानीका महिलाका हकमा यो जवाफ गलत सावित हुन्छ । बागलुङका पुरुष भने बन्ध्याकरण गर्न पनि मान्दैनन् । अस्थायी साधन प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य चौकीमा गएर लिन…
June 8, 2019 Purakhabar News
बिगुल संवाददाता, काठमाडौँ: – आजकाल महिलाहरु घर वा बाहिर दुवै क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन्। दिनभरि विभिन्न प्रकारका कामहरूको गर्ने भएका कारण उनीहरु प्रायः बिर्सन्छन् कुन चिज कहाँ राखेको थियो र कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा । यसको लागि मेमोरी पावर बढाउन आवश्यक छ। मेमोरी पावरलाई बढाउने मनोरञ्जनपूर्ण तरिका यो भन्दा अरु हुन सक्दैन, विशेषगरी महिलाहरुका लागि । यो एक नयाँ अनुसन्धानमा भनिएको छ । अनुसन्धानले फेला पारेको छ कि अत्याधिक मात्रामा यौन सम्पर्क गर्नाले महिलाहरुमा सम्झने क्षमता बढ्छ। महिलाहरूले यस तरिकाबाट आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउनुहोस् मोन्ट्रियलको म्याकगिल विश्वविद्यालयको…
मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा अनसन बसिरहेका ११ नर्स पक्राउ
May 17, 2019 Purakhabar News
काठमाडाैँ, ३ जेठ । प्रहरीले मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा ८ दिनदेखि अनसन बसिरहेका ११ नर्सलाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार बिहान आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केन्द्रमै कार्यरत नर्स रिम्सा कार्कीले बताइन् । प्रशासनले आफ्ना मागको सुनावाइ नगरेपछि नर्सहरूले अस्पताल ठप्प पारेका थिए । अस्पतालमा सेवा लिन आउने मृगौलाका बिरामीहरूको एक्सरे लगायतका परीक्षणहरू केन्द्रमै राखेर बिरामीका गुनासोको व्यवस्थापन गर्न, नर्स र बिरामीको अनुपात मिलान गर्न, अस्पतालको जनशक्तिका लागि लोकसेवा खुलाउन र स्थापनाकालदेखि कार्यरत नर्स तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन, ठेकेदारी प्रथाद्वारा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्त नगर्नलगायतका ६ बुँदे माग राखेर उनीहरू वैशाख ११…
यौवन अवस्थामा कति पटकसम्मको यौन क्रियालाई सामान्य मानिन्छ ?
April 22, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं । सेक्स कतिपटकलाई सामान्य मान्ने भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर दिन सकिदैन । यद्धपी अनुसन्धानकर्ताहरुले यसको बारेमा केही तथ्य फेला पारेका छन् । दुई जना (जोडी) बीचको नितान्त निजी मामिला हो सेक्स अर्थात यौनसम्पर्क । त्यसैले कतिपटक हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न त्यति सान्दर्भिक पनि होइन । फेरी, यौनसम्पर्क घटबढ हुनुमा जोडीको रुची, अवस्था, बाताबरण, उमेर, स्वास्थ्य आदिको प्रभाव पर्न सक्छ । उनीहरुका अध्ययन अनुसार सामान्य १८ बर्ष देखि २९ बर्षको उमेरका जोडीले बर्षमा ११२ पटक यौनसम्पर्क अर्थात लगभग तीन दिनमा एक पटक सेक्स भयो भने त्यसलाई सामान्य मानिन्छ । यस्तै ३०…
April 16, 2019 April 16, 2019 Purakhabar News
सेक्स पावर बढाउने औषधि सामान्यतया यौनदुर्बलता भएका बयस्क महिला तथा पुरुषले प्रयोग गर्छन । तर फार्मेसीमा यस्ता औषधिका बिक्री विवाहितभन्दा अविवाहित युवाहरुले बढी मात्रामा खरिद गरेको पाईन्छ । बानेश्वरमा फामेर्सी सञ्चान गरेर बसेका दिपक घिमिरे भन्छन ‘प्रायजसो यस्तो औषधि किन्न युवाहरु नै आउछन, हप्तै पिच्छे किनेर लान्छन् ।’ उनीहरुको मागअनुसार हामी यस्ता औषधिहरु मगाउछौ, यसमा हाम्रो कुनै दोष हुने कुरै भएन ।’ ग्राहक कस्ता कस्ता अधिकाशं औषधि पसलमा यस्ता औषधि किन्न आउनेहरु बयस्क भन्दा युवाहरु नै नै पाईएको छ । बयस्कहरु औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि बढी प्रयोग गर्ने भेटिएको…